သငျသညျစက်မှုလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုပြီးအောင်၏ခြေလှမ်းများအားဖြင့်သင်တို့ကိုယူပါ -- aluminum profile manufacturer fscyal.com
အဆင့် 1: Industrial aluminum profile cutting
The standard size of industrial aluminum profiles is 6M (ဥရောပစံ). စက်မှုအလူမီနီယံသတ္တုကိုယ်ထည်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်မှာကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုအရွယ်အစားလိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်. The seemingly simple process of industrial aluminum profile cutting includesavery high technical content and proficiency The cutting saw blade used for industrial aluminum profile cutting hasathickness of 3MM, then the 3mm size must be calculated in the cutting size of the raw material. The cutting error range based on the cutting saw rule alone can be maintained within 1mm. သို့သော်, an experienced cutting master will calculate the cutting margin based on the overall size, and is fully capable of controlling the error range within the range of 0.2mm-0.5မီလီမီတာ, which greatly improves the accuracy of the product.
အဆင့် 3: Industrial aluminum profile tapping
အမှတ်အသားများ (Tags): လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုထုတ်လုပ်သူ, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုပေးသွင်း, စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို